Posted by ကို Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 20, 2021 | web ပေါ်မှာ
Ce အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်း သင့်အနေဖြင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်းကိုဆိုလိုသည် ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်အဝေးမှလက်မှတ်ထိုးပါကျေးဇူးပြုပြီး Zoho Sign solution ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီ၏အစီအစဉ်တွင် Zoho Sign အခမဲ့သင်ခန်းစာ ဆက်ကပ်အပ်နှံ အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်
Un ဗီဒီယိုသင်တန်း နားလည်ရန်မိနစ် ၄၀ မပြည့်ခင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိသည်
သင်၏ Word / Excel / etc စာရွက်စာတမ်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်း။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကို PDF format ဖြင့်တင်ပို့ခြင်း၊ သင်၏ Zoho Sign အကောင့်, ကန ဦး ချိန်ညှိချက်များ၊ သင်၏စာရွက်စာတမ်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သင်၏စာရွက်စာတမ်းကိုဖန်တီးခြင်းနှင့်အတူ လက်မှတ်ထိုးဒေသများ, သိကောင်းစရာများနှင့် အပြန်အလှန်အရာဝတ္ထု, အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာရွက်စာတမ်းများကူးယူခြင်း။
ဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်၊ ဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလက်မှတ်ထိုးပါ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းခွင်တစ်လျှောက်တွင်သင့်အားအစေခံစေပြီးပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ စက္ကူလက်မှတ်များနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်မြှုပ်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း et နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအဖိုးတန်အချိန်ကိုချွေတာ.
ကောင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Zoho သင်္ကေတ !
အခမဲ့ - Zoho Sign ဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးပါ မတ်လ 4, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် ယူရို ၁၀၀၀ ကိုဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ
လွန်ခဲ့သောJean-Bernard သည်စားဖိုမှူးမှဟိုတယ် Fauchon Paris ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်
BA BAdge- ဖွင့်ထားသော တံဆိပ်များဖြင့် အသိအမှတ်ပြုပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
သုတေသန လုပ်ငန်းများတွင် သိပ္ပံပညာ ခိုင်မာမှု